usb power surge error ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဇင်​မျိုး . usb power surge ​စာ​တန်း​ပဲ ​တ​ချိန်​လုံး​ပေါ်​နေ​တယ်...usb ​တွေ​လည်း ​ထိုး​လို့​ရ​တဲ့​ဟာ​ရ​တယ်..​မ​ရ​တဲ့ port ​မ​ရ​ဘူး...​ဘာ​ဖြစ်​တာ​လဲ​မ​သိ​ဘူး​ဗျ... ​ရုံး​တ​ရုံး​လုံး​ကို​ဖြစ်​နေ​တာ..​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး...
​ညီ​လေး​လား ​ညီ​မ​လေး​လား​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​ညီ​လေး​ပဲ​ဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် . ​အစ်​ကို​တို့ power supply ​က​နေ out put ​ထွက်​ပေး​တဲ့ voltage ​က usb port ​အ​တွက်​ဆို​ရင်5volt ​ထွက်​ပေး​ပါ​တယ် ​ငါ့​ညီ . ​ငါ့​ညီ​တို့ ​သုံး​နေ​တဲ့ ​ရုံး​မှာ​က ​မီး​အား ​မ​မှန်​လောက်​ဘူး​လို့ ​အစ်​ကို​ထင်​ပါ​တယ် . ​မီး​အား​မ​မှန်​တာ​ဆို​တာ​က 220 ​မှန်​ရဲ့​လား . ​ပြီး​တော့ ​ခံ​ပြီး​တော့ ​သုံး​ထား​တဲ့ transformer ​ဟာ ​မီး​အား ​ကို ​ပုံ​မှန်​ဖြစ်​အောင် ​မ​ထိန်း​နိုင်​တာ​မျိုး​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​အ​လုံး​ရေ​များ​ပြီး​တော့ ​ပေး​ထား​တဲ့ ​မီး​အား ​က ​နဲ​နေ​ရင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​မီး​ခ​ဏ​ခ​ဏ​ကျ​လိုက်​တက်​လိုက် ​ဖြစ်​နေ​ရင်​လဲ powersupply ​က ​နေ ​ထွက်​ပေး​တဲ့ voltage ​က 5volt ​မ​ပြည့်​ရင် ​အ​လုပ်​မ​လုပ်​ပါ​ဘူး. ​ဥ​ပ​မာ ​ငါ့​ညီ printer (or) scanner ​ကို usb port ​ထိုး​ထား​ပေ​မယ့် ​ထုတ်​လို့​မ​ရ​တာ​မျိုး scan ​ဖတ်​လို့​မ​ရ​တာ​မျိုး ​မ​ရ​ဘဲ error ​ပြ​နေ​တာ​မျိုး​ပေါ့ . ​အဲ့​လို​အ​ခါ​မျိုး​ဖြစ်​နေ​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အ​ခု​န​က ​ငါ့​ညီ​ပြော​တဲ့ error ​မျိုး​ပြ​တတ်​ပါ​တယ် . ​အ​ဖြေ​ကို ​တိ​တိ​ကျ​ကျ​သိ​ချင်​ရင် ​မီး​အား​မှန်​ပြီး​တဲ့ ​မီး​အား​လိုင်း​တစ်​လိုင်း​နဲ့ ​ချိတ်​ပြီး​တော့ UPS ​ခံ​ပြီး​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​မီး​အား​မ​မှန်​လို့​ဆို​တာ ​သေ​ချာ​သွား​ပါ​ပြီ . ​အဲ့​လို​ဆို​ရင်​တော့ ​ငါ့​ညီ ​ရုံး​ခန်း​နဲ့​ပဲ ​လုပ်​ခိုင်း​မှ​ရ​မယ် . ​အစ်​ကို​လဲ ​မ​ကူ​ညီ​နိုင်​ဘူး .
zmozmo November 23, 2009 at 11:42 AM
​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​ဗျာ....​အဲ​လို​ဖြစ်​ရင်​မ​လွယ်​ဘူး...​ပ​ညာ​တ​ခု​တိုး​တာ​ပေါ့...​ကျွန်​တော်​လည်း IT ​စိတ်​ဝင်​စား​တဲ့​လူ​တ​ယောက်​ပါ...​အ​ကို့​ဆိုဒ်​ကို ​သိ​ရ​တာ..​တော်​တော်​အား​တက်​တယ်...​တ​ကယ့်​ကို ​ဆ​ရာ​သ​မား​တ​ယောက်​ပါ​ပဲ​ဗျာ....​ကျေ​ဇူး​ပါ​နော်..
thiha December 14, 2009 at 10:02 PM
​ကျွန်​တော်​လိုက်​ရှာ​တာ​လဲ​နှံ့​နေ​ပြီ​အွန်​လိုင်း​မှာ​မ​တွေ့​လို့​ပါ​ခင်​ဗျာ..​ကျွန်​တော် USB (Kingsotn) 4GB ​ကို ​အ​ပြင်​ကွန်​ပြူ​တာ​တစ်​လုံး​မှာ ​သွား​သုံး​ပါ​တယ် ​ပြန်​ရောက်​တော့ ​ကျွန်​တော့်​ကွန်​ပြူ​တာ​မှာ​ထိုး​လိုက်​တာ ​စက်​မှာ​ရှိ​တဲ့ USB Disk Security software ​က virus ​ရှိ​တယ်​ဆို​ပြီး​ပြော​ပါ​တယ် ​အဲ့​ဒါ​နဲ့ ​ကျွန်​တော်​လည်း ​သူ​ပြော​တဲ့​အ​တိုင်း delete ​လုပ်​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​လုပ်​လည်း​လုပ်​ပြီး​ရော ​အဲ့​ဒီ USB ​ကို​ဖွင့်​လို့​လဲ​မ​ရ​တော့​ဘူး​အ​ကို.. ​ဖွင့်​လို့​ရှိ​ရင် format ​လုပ်​ခိုင်း​ပါ​တယ်..​ဒါ​ပေ​မယ့် format ​လုပ်​လို့​ရှိ​ရင်​လည်း ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး​အ​ကို the disk is write protected ​လို့​ပြော​ပါ​တယ် ​အဲ့​ဒါ​နဲ့ ​ကျွန်​တော် write protected error ​ကို​အွန်​လိုင်း​မှာ​လိုက်​ရှာ​ပါ​တယ် ​တွေ့​လဲ​တွေ့​ပါ​တယ် ​အဲ့​ဒီ write protected ​ကို​ပိတ်​လို့​ရှိ​ရင်​လည်း ​ကျွန်​တော် USB ​က ​ပေါ်​ကို​မ​ပေါ်​တော့​ဘူး ​ဒါ​နဲ့ ​ကျွန်​တော် ​အဲ့​ဒီ​ကောင် software ​ကို registry ​ထဲ​က​နေ​သွား​ပြီး​တော့ uninstall ​လုပ်​လိုက်​ပါ​တယ် ​ပြီး​တော့ ​စက်​ကို restart ​ပေး​ပြီး ​ပြန်​ထိုး​တော့​လည်း ​သူ့​ဟာ​နဲ့​သူ install ​လုပ်​ပြန်​တယ်..​ဒါ​ပေ​မယ့်​သုံး​လို့​က​မ​ရ​ပါ​ဘူး​အ​ကို.. ​အ​ရင်​အ​တိုင်း​ပဲ error ​တက်​လာ​ပါ​တယ် ​အဲ့​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို​တစ်​ချက်​လောက်​ကူ​ညီ​ဖြေ​ရှင်း​ပေး​ပါ​ဦး.. ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​အ​ကို။
​ပြီး​တော့ ​ကျွန်​တော် ​စက်၃​လုံး​မှာ format ​လိုက်​ချ​ကြည့်​ပါ​တယ်​အ​ကို ​မ​ရ​ဘူး​ခင်​ဗျ error ​က ​အဲ့​ဒီ​ပုံ​စံ​အ​တိုင်း​ပဲ​တက်​နေ​တယ်.. ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မှန်း​မ​သိ​တော့​ဘူး ​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ​ဦး​အ​ကို။
aung ba chit December 25, 2011 at 11:22 AM
​အ​ကို​တစ်​ချ​တက်​လောက်​ကူ​ညီ​ပါ ​ကျွန်​တော့် USB ​က format ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး